Fariin Ku Socota Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas – Radio Daljir
Noofember 8, 2017 9:56 b 1
Waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka 114 Quranka cadadiisa. Dhanbaalkeyga wuxuu ku socdaah reer puntland dal iyo dibadba Gaar ahaan Madaxweynaha Puntland Mudane Cabdiwali Cali Gaas.
Puntland waxay jirsatay 19 sano waxaan soo maray 5 madaxweyne oo uu madaxweyne ku Xigenkiisu ahaa maxamed cabdi Xaashi uu hayey mudo 8 bilood oo uu Madaxweyne ka ahaa ,
Afarta kale oo kala ahaa AUN Mudane cabdulahi yusuf.AUN mudane Cade Muuse iyo Cabdiraxman shiikh maxamed faroole iyo Madaxwenaha waqtigaan jooga Mudane Cabdiwali Cali Gaas.
Anigoo aan eedeyneynin inta maxadweyne ee soo martay puntland aan wax ka sheegeynin nin walba Goob jooge ayaan u ahaa maqaal iyo aragti.
Abdulahi yuusf Ahmed(AUN)inta uu joogey puntland waxaa u galay daqaal Xoogan oo u ku raadinayey in aysan bur burin puntland waana ku guleystay, waxaan la soconaa in Mogdisho dulaan culus uga yimid Gaar ahaan Abdiqaasin salaad booy iyo Ragiisii oo u Xolihii Somaliya loogu tala galay in loo adegsaday bur burinta puntland
Waxaan la soconay waxa allale iyo wixii uu soo diray Abdiqaasin in uu cabdulahi caqta mariyay kana Guuleystay Dar darankiisi baa waxaa ku jiray Puntland yesan bur burin (AUN)
Cade Muuse Xirsi(AUN) wuxuu ahaa Nin shaqo wanaagsanaah oo dhib yar iyo hadal yar Janatu fardowsa alah Siiyo, Xilkiisan soo Gutay si sharaf lehna ku wareejiyay.
Abdirahman Shiikh Maxamuud faroole nin shaqeeya ayuu ahaa waqtigiisan soo qaatay Xilkan ku wareejiyey si sharaf iyo nidaam leh.
Waqtigaaan aanu jogno waxaa puntland Xilkeedu saran yahay Mudane Abdiwali Ali Gaas,wax qabad kisiina waanu og nahay iyo dadaalkiisa iyo waxqabadkiisa intaba.
Mudadii ay jirtay puntland oo 19 sano waa Ninkii ugu horeyey ee ka Dega wadada laamiga oo aynu ogsoonahay iyo wax qabadkiisa oo isla socdah.
Meelo badan oo la Gaari waayey ayuu soo maray, oo ay ka mid tahay Gardafuul iyo inta ku Xiran, oo police loo sameyey, oo cafimaad iyo waxbarasho loo sameyey , oo biyo Galin loo sameye oo wax kasta oo ay Degmo u baahantahay loo dhameystiray Gaar ahaan Bari, Nugaal ,Bargaal, Isku shuban, Xaafuun iyo Caluula.
Waan ogsonahay waxqabadka Abdiwali Ali Gaas haddii aynaan Xaqirin wax qabadka uu u sameeyey puntland.
Magaalada Garawe Dowladii ka horeye Abdiwali ali Gaas waxay ku shagen jireen Guryo kiro ah ,Mantayna inta wasaarado ama hayado dowli ahiyo wadooyinka.tusaale Malintii uu faroole joogay barlamanka puntland iyo mantay bal isu eega, jawaabteeduna adinkaa leydin ka rabaa Reer puntland.
Waan ognaha Gobolka Sanaag iyo wax qabadkii uu ka Geystay iyo Mashaariicdii tirade badney oo ilaa iyo waqtigaan socda ayna mahad weyn uga hayaan Reer Sanaag.
Gobolka sool waxaan ognahay in horumar fiican laga Gaaray gar ahaan ceelasha biyah, mashaariic loo Geeye,tuulooyinka wax badan laga qabtay.
Waxaan la dar daarmayaa dadka boosaaso Degen in aad haystaan fursad weyn oo aysan haysan Gobolada kale ee Puntland. Ka faaiideysta una faa,iideya walaalihii reer Puntland meel kastoo ay jogaan.
Waxaa iga su,aal Abdiwaliyo wagii Madaxweyne Abdulahi yusuf (AUN)in Ciidamo Gaarery 4500 oo saraakiil nooc walba isu jirtay iyo qalabkoodii uu Mogdisho iyo jowhar iyo baydhabo la Geeyey Xagee ku danbeeyeen noo soo Sheeg???
Puntland afarta Geesood baa daqaal ka socdaah oo aynu ogsoonahay inta joogtana kama badna in ay degaankooda ka tagaan,si ay u difaacaan dhulkod marka adigoo dhibkaas og maxaa keeney Ciidamo ayaa Mogdisho u Geynayaah??
Mogdisho Ragii la geeyey wax ka soo nogday ma jiraan.wax Ciidan oo loo hayan ma jiraan hadii aynu nahay dadka ku abtirsadah Puntland dal iyo dibadba.
Abdiwali miyaadan la socon Cidamadii Puntland ay laheed oo dib danbe ugu soo nogon dalkoodii iyo dadkoodiiba la qabsaday oo ilaa iyo waqtigaan ay Puntland ka maqan tahay.
Arintaas mid fudud ma aha ee ka fiirso Mudane madaxweyne ,waxaad ogtahay dhibaatadii ka soo gaartay AUN Abdulahi yusuf Ahmed.waxaan baaq u dirayaa,barlamanka Puntland, Golaha wasirada, Isimada,wax garadka oo dhan, in aad ka firsataan dhibaatadii naga soo Gaaraty Koofur iyo sida Cidamadeenii loo cirib tiray.waxaan kugula talin lahaa mudane madaxweyne in aadan Cidamadeen aad Geynin Konfurta somaliya.
Maqaalo Kale 155 Wararka 9550
Saed Crahmaan 11 months
tiisa daryeeelaa tu kle ku dara